Shirkadda Spectrum Oo Soo Gabagabeysay Xog Uruurintii Ay Ka Sameynaysey Dhul Badeedka Koonfurta Soomaaliya – Goobjoog News
Shirkadda Spectrum Oo Soo Gabagabeysay Xog Uruurintii Ay Ka Sameynaysey Dhul Badeedka Koonfurta Soomaaliya
Qoraal kaso baxay wasaaradda Batroolka iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkadda Spectrum ASA ay soo gabagabeysay xog uruurin sahmin shidaal ah oo ay ka waday dhulbadeedka Koonfurta Soomaaliya.
Qoraalka ayaa sidan u qoran:-
Shirkadda Spectrum ASA waxay si guul ah kusoo gaba-gabeysay xog uruurintii (2D seismic data) dhul badeedka koonfurta Soomaaliya. Waxay ahayd 5tii September 2015 markii Dowladda Federaalka Soomaaliyeed (DFS) iyo shirkadda Spectrum ASA ay heshiis xog uruurin ku wada galeen xaflad lagu qabtay SYL Hotel oo ku yaalo magaalada Muqdisho. Wax dhibaato ah ama amni daro ah ma aanay dhicin intii lagu jiray xog uruurinta.
Dhul badeedka xogta laga aruuriyay waxay la eg tahay 20,582.75 Km. Xogtaan cusub waxa ay kaabi doontaa xog badeed hore oo dhan 20,000 km taas oo la soo aruuriyay 2014. Labada xog waxay sahlayaan in daraasad gun fog lagu sameeyo rajada shidaal ee ku jirta badda Soomaaliyeed.
Spectrum waxay bilowday in xogta la fasiro taas oo diyaar noqonaysa dhamaadka sanadkaan, DFS ayaa baahin doonta natiijada xogta shidaal ama gaas ee laga soo uruuriyay badda koonfurta Soomaaliya.
Waxaa intaa dheer, 7 qof oo ka tirsan shaqaalaha Wasaaradda bartayna cilmiga geology (geo-scientists) ayaa ka qayb galay xog uruurinta kuwaas oo tababar lagu siiyay sida maraakibta xogta u uruuriyaan. Dadka tababarka soo qaatay waxa ay aadi doonaan Qaahiro, Masar, halkaas oo lagu bari doono xarunta Spectrum ku lee dahay sida loo fasiro xogta.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shirkadda Spectrum ASA waxay heshiiskan la gashay 5-tii September 2015, (hadaba riix halkaan si aad heshiiskaasi u akhrisato)
Goobjoog News ayaa 6-dii Septembe oo ah maalin kadib heshiiskaasi waxaynu wareysi la yeelanay wasiirka wasaaradda Batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar waxa uu ku faah faahiyey heshiiskaasi la gaaray iyo faa’idooyinka Soomaaliya ugu jirto. (Riix halkaan si aad wareysiga u akhrisato)
Koonfur Galbeed: Shabellaha Hoose Laguma Heshiinayo Inta Ay Ciidanka Dowladda Joogaan
Ciidamada Dowladda Oo Dib Ula Wareegay Gacan Ku Haynta Degmada Ruunirgood Ee Sh/dhexe
3 May: Maalinta Xorriyadda Hadalka Adduunka